မြတ်လေးငုံ: အာဇာနည် ဗိမာန်သို့ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ပြည်သူ လူထုများသွားရောက်ဂါရ၀ပြု.
အာဇာနည် ဗိမာန်သို့ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ပြည်သူ လူထုများသွားရောက်ဂါရ၀ပြု.
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်တွင် သံဃာတော်များအားဆွမ်းကပ်လှု
မေလ်းသို့ ပေးပို့ လာသော ဓာတ်ပုံများအား ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါသည်.။
အဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင် ပြုလုပ်သော ၆၄နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနား
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မိန့်ခွန်း